Vaovao - Fandaharam-pahavitrihan'ny fanentanana antsipiriany momba ny fampielezan-kevitra momba ny fampielezan-kevitra Teyeleec
Teyeleec Fampisehoana an-tsary ny famoahana horonantsary fanentanana momba ny hetsika isan-taona
Lohahevitry ny hetsika
Fanentanana fanaovana sary an-tsary Teyeleec voalohany isan-taona
Na dia voasoratra anarana amin'ny 2015 aza ny marika Teyeleec, dia tena marina fa tsy mbola nitantana an'io marika io izahay talohan'izay. Fantatsika rehetra ny fahasarotana hampahafantarana tsara ny marika. Misy sinoa malaza milaza fa "ny mpanao vanja kely telo mitambatra dia miteraka saina hendry", izay tonga ao aminay fa tokony hampiarahanay ny fahendrena rehetra. Afaka manolotra anao ny santionan'ny vokatra izahay, ary rehefa avy nandramanao izany, ary manaporofo izany fa tsara ny kalitao, dia afaka manao horonantsary hizara izany amin'ny namanao sy ny fianakavianao ianao.
Amin'ny faran'ny taona 2020, mba hanadinoantsika ny maha-irery antsika rehetra amin'ny maha-olombelona antsika, hankasitrahana ny fiainana ananantsika na mafy toy inona aza ny toe-java-misy manerantany, hankamamiana ny finamanana mbola ananantsika, indrindra indrindra, ny fanitarana ny Fampahafantarana ny marika Teyeleec.
SHENZHEN TEYELEEC TEYELEEC TECHNOLOGY CO., LTD, departemanta marketing.
Manomboka amin'ny 1 Desambra 2020 ka hatramin'ny 28 feb 2021.
Mpandray anjara amin'ny hetsika
Tsy misy fetrany, fampielezan-kevitra eran'izao tontolo izao, afaka manatrika izany ny rehetra sy ny olon-drehetra. Saingy satria tsy maintsy manao horonantsary ianao, raha manana haino aman-jery sosialy toa Facebook, YouTube, twitter, dia heverinay ho laharam-pahamehana izany.
• Voalohany, ny mpandray anjara dia tsy maintsy mandefa mailaka (info@teyeleec.com) ho anay, hampahafantatra fohifohy momba azy amin'ny alàlan'ny rohy media sosialy misy azy ankehitriny.
• Faharoa, ny mpandray anjara dia mila manazava sy mandresy lahatra ny antony tsy maintsy andefasantsika santionany maimaimpoana aminy? Ary ahoana no fomba hampidiranao ny marika sy ny entanay?
• Fahatelo, ny mpandray anjara dia mila milaza amintsika ny adiresy fandefasana azy ankehitriny miaraka amin'ny anarana feno sy nomeraon-telefaona.
• Efatra, aorian'ny handinihantsika fa mahafeno fepetra ny mpandray anjara, handefa ny santionanay ao anatin'ny 3 andro izahay, aorian'ny nahazoan'ny mpandray anjara ilay entana, ny mpandray anjara dia tokony hamita ny fanaovana horonantsary ao anatin'ny 7 andro.
• Dimy, aorian'ny nahazoantsika ilay horonantsary, raha tsy mahafeno fepetra izy dia tsy afaka mandefa amin'ny Internet ilay mpandray anjara ary tsy maintsy manao video hatrany hatrany mandra-pankatoavin'i Teyeleec. Ny mpandray anjara dia afaka manao horonantsary amin'ny fiteny rehetra afa-tsy ny Sinoa.